Screenshots and photos | December 2019
Tena Screenshots and photos
Review of the editor's best photo for Windows
Samihafa ireo mpamoaka sary amin'ny PC no afaka manilika na iza na iza. Mba hanampiana anao hitady ny marina, dia manolora fijery fohy momba ny 5 mpamoaka sary tsara tarehy izay mifanaraka amin'ny zavatra tena ilain'ny mpampiasa. Fifantenana sary rindrambaiko ho an'ny mpaka sary Photo Editor Movavi dia programa mora ampiasaina miaraka amin'ny fitaovana marobe izay tonga lafatra ho an'ireo mpankafy mpanazatra sary.
Fametrahana sary antitra ao an-trano
Hello Azo antoka fa ny rehetra ao an-trano dia manana saripika tranainy (mety ho efa antitra mihitsy aza), ny sasany sasantsasany, miaraka amin'ny hadisoana, sns. Ny fotoana dia mitaky ny habeny, ary raha tsy "mahatratra azy amin'ny digital" (na tsy manao kopia azy io), dia aorian'izay dia mety ho very mandrakizay ny sarin'ireo sary (indrisy).
Ahoana ny famariparitana sary maromaro indray mandeha (na crop, rotate, flip, etc.)
Good day. Alao sary an-tsaina ny asa: mila manapaka ny sisin'ny sary (ohatra, 10 px) ianao, ary avereno isaky ny sary izany ary mamafa izany amin'ny endrika hafa. Toa tsy sarotra izany - dia manokatra ny tonian-dahatsoratry ny grafika (na ny Paint, izay ao amin'ny Windows aza), ary nanao ny fanovana ilaina.
Ahoana no fomba fanaovana ScreenShot (pikantsary) ny efijery amin'ny Windows. Ahoana raha tsy mahomby ny pikantsary?
Good day! Fahendrena malaza: tsy misy mpampiasa solosaina izay tsy afaka manonofy (na tsy mila izy) farafaharatsiny mba haka sary ny efijery! Amin'ny ankapobeny, ny fitifirana sary (na ny sariny) dia nalaina tsy misy fanampiana amin'ny fakantsary - ampy ny hetsika vitsivitsy ao amin'ny Windows (manodidina azy etsy ambany). Ary ny anaran'ny sary tahaka izao dia ScreenShot (amin'ny endrika Rosiana - "screenshot").
Ny rindrambaiko tsara indrindra amin'ny famoronana screenshots. Screen ho 1 seg.
Hello Iza amintsika no tsy te haka sary an-tsehatra amin'ny ordinatera? Eny, saika ny mpisera vaovao rehetra! Azonao atao, mazava ho azy, azafady maka sary ny efijery (fa tsy izany loatra!), Na azonao atao ny maka sary iray mialoha - izany hoe, araka ny tokony ho izy, dia sary iray (dikanteny avy amin'ny teny Anglisy - ScreenShot). mbola misy hafa antsoina hoe "screenshots") ary amin'ny "fomba fanao" (araka ny voalaza amin'ity lahatsoratra ity: https: // pcpro100.
https://termotools.com mg.termotools.com © Screenshots and photos 2019